ब्लग निर्माता, आपूर्तिकर्ता | चीन ब्लग कारखाना
सडक बाहिरी निर्माण मिसिन
तपाईं घास rake प्राप्त गर्दा के गर्न आवश्यक छ ??
18-08-02 मा व्यवस्थापक द्वारा
मोडेल 2500 18-50hp 1 ट्रयाक्टर मा प्रयोग गर्न सकिन्छ पहिलो तीन बिन्दु बांध्नु गर्न मुख्य विधानसभा संलग्न गर्नुहोस्। को tine पोल स्थापना गर्दा, चार बोल्ट प्रयोग जडान गर्दै बेयरिंग को hub.The tine पोल तल छेउमा रेल भित्र हो भनेर पक्का।2tines हो भनेर पक्का ...
अघि मिनी राउन्ड बेलर गर्न सञ्चालन, तपाईं के गर्न पर्छ ??
18-08-01 मा व्यवस्थापक द्वारा
त्यहाँ पहिले के मिनी राउन्ड बेलर गर्न सञ्चालन गर्न केही कुरा छन्। 1 तीन बिन्दु बांध्नु गर्न बेलर संलग्न गर्नुहोस्। यो उचाल्न र विधानसभा प्रदर्शन गर्दा बेलर सार्न अनुमति दिन्छ।2तपाईंले बेलर कक्ष भित्र भण्डारण भएका भागहरु प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ। को भागहरु पुन: प्राप्त गर्न, हटाउन ...
ठेगाना: वेफांग शहर, शेडोंग प्रांत, चीन